यी तथ्याistics्कहरूले तपाईंको मोबाइल मार्केटि ofको अवलोकनमा प्रभाव पार्नु पर्छ Martech Zone
के तपाईंले हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोगको सबैभन्दा नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुभयो - आईओएस, Android? हामी अझै सामग्री अनुकूलितमा काम गरिरहेका छौं तर त्यहाँ फ्रेमवर्क छ, र यसलाई भूमिबाट हटाउन कडा मेहनतले लिएको छ धन्यवाद। ब्लूब्रिजबाट अद्भुत मोबाइल अनुप्रयोग निर्माण प्लेटफर्म!
हामी सम्भावनाहरूको बारेमा धेरै उत्साहित छौं! हामीसँग पहिले नै हाम्रो छ मार्केटिंग पोडकास्टहरू र हाम्रो मार्केटिंग क्लिप्स श्रृंखला पपुलेटिंग अनुप्रयोग, पनि! हामी घटनाहरू प्रकाशित गर्दैछौं र पुश सूचनाहरू पठाउन पनि सक्दछौं।
किन यो यति महत्त्वपूर्ण छ? ठिक छ, यी १ mobile मोबाइल मार्केटिंग तथ्या .्कहरू बाट हेर्नुहोस् कोरुना, एक मोबाइल मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्म:
Americans 44% अमेरिकीहरू भन्छन कि उनीहरूले यो मोबाइल मोबाइल बिना एक दिन बनाउन सक्दैनन्
२०१ by सम्ममा .5.2.२ अरब मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू हुनेछन्
एप्पल अनुप्रयोग स्टोरबाट second850० मोबाइल अनुप्रयोगहरू प्रत्येक सेकेन्ड डाउनलोड हुन्छन्
सबै ईमेल क्लिकहरूको% 45% मोबाइल उपकरणमा छन्
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू औसत मासिक २.26.7..XNUMX अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्छन्
मोबाइल अनुप्रयोग स्थापनामा 345 XNUMX% YoY वृद्धि भएको छ
मिलेनियल किशोरहरूले मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा दिनको 6.3..XNUMX घण्टा खर्च गर्छन्
Len०% हजारौंले मोबाइल शपिंग अनुप्रयोग डाउनलोड गरेको छ
Add%% मोबाइल लतमा बृद्धि, जसले दिनको +०+ पटक अनुप्रयोगहरू सुरू गर्छन्
अमेरिकी वयस्क १ 18-२24 ले मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा औसतमा 91 १ घण्टा खर्च गर्दछ
अनुप्रयोगहरूले आधा जीवनकालको प्रयोग पहिलो lifetime महिनामा प्राप्त गर्दछ
अमेरिकाको सबै पैसाको २०% मोबाइलबाट आयो
औसत पुश अप्ट-इन दरहरू: आईओएस 51१%, एन्ड्रोइड% 86% छ
पुश अधिसूचनाहरूमा अप्ट इन भएकाहरूको औसत धारणा दरहरू २x हुन्
मोबाइलले संसार परिवर्तन गरेको छ। यो स्वास्थ्य सेवा, शपिंग, समाचार, मिडिया, विज्ञापन वा गेमि, हो, स्मार्टफोन जीवनको हरेक पक्षमा महत्वपूर्ण कारक भइरहेको छ। यो इन्फोग्राफिक फ्रेम कसरी ठीक ब्राउन को लागी स्मार्ट ब्रान्ड को लागी गरी रहेछ कि मोबाइल सही तरीकाले अँगाले।
टैग: मोबाइलमा ईमेल क्लिक थ्रु रेटप्रति महिना कति अनुप्रयोगहरूकति मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूसहस्राब्दी मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोगमोबाइल उपकरणमोबाइल मार्केटिङमोबाइल मार्केटिंग तथ्या .्कमोबाइल मार्केटिंग उपयोगमोबाइल पुश सूचनाहरूसूचना प्रतिधारण धक्कासूचनाहरू धक्का दिनुहोस्स्मार्टफोनस्टारबक्स